Xiisad dagaal oo ka taagan Xeraale iyo Ahlsuna oo ciidamo fara badan u dirtay – XAMAR POST
Wararka ka imaanaya deegaanka Xeraale ee Gobolka Galgaduud ayaa sheegaya inay ka jirto xiisad dagaal oo u dhaxeysa maleeshiyo deegaanka ah iyo kuwa Ahlusuna, kuwaasoo maalmihii la soo dhaafay ku dagaalamayay gacan ku heynta deegaanka.
Dhaq dhaqaaqyo ciidan oo iska soo hor-jeeda ayay labada dhinac ka wadaan gudaha iyo duleedyada, iyadoo Ahlusuna ay ciidamo fara badan oo duulaan ku ah u dirtay deegaanka, si ay weerar rogaal celin ah ugu qaadaan.
Guddoomiyaha deegaanka Xeraale ee Maamulka Galmudug Bashiir Daahir Dhagabadan ayaa sheegay in Ciidamo ku hubeysan gaadiidka dagaalka ay Ahlusuna geysay duleedka Xeraale, ayna doonayaan inay dib ula wareegaan.
Dagaaladii u dambeeyay ee ka dhacay deegaankaas ayaa waxaa ku dhintay dad fara badan, waxaana deegaanka ka barakacay boqolaal qoys, waxaana mar kale jirta cabsi laga qabo in mar kale dagaalo dib uga bilowdaan.
Maamulka Galmudug ayaa ugu baaqay labada dhinac inay dagaalka joojiyaan, waxaana jiray baaqyo dowladda Federaalka horay ugu jeedisay dhinacyada ku dagaalamaya deegaankaas inay joojiyaan.
Dagaal u dhaxeeyay Galmudug & Puntland oo ka dhacay Gobolka Mudug